Motorola amalite nyocha Oreo na Moto G4 Plus n'oge na-adịghị anya | Gam akporosis
Nyaahụ ka ekpughere na ọ bụ Moto G5 na G5 Plus natara gam akporo Oreo, na akụkọ na-abịa banyere ekwentị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ ahụ. Na nke a ọ bụ Moto G4 Plus. Na mbụ ekwentị a adịghị na ndepụta nke ụdị ndị ga-enweta mmelite ahụ, mana ngagharị iwe sitere n'aka ndị ọrụ manyere ụlọ ọrụ ahụ ime ya. Ma ugbu a, ha ga-ebido n’ule.
Ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọ dịghị ụbọchị e nyere maka mmalite nke ule ndị a na gam akporo 8.0 Oreo na Moto G4 Plus. Mana mkpebi ụlọ ọrụ ahụ iji tụlee imelite ekwentị ahụ bụ ihe ịtụnanya, ọ bụ ezie na ndị ọrụ nwere otu ọ bụ ozi ọma.
Kemgbe ekwuputara na ekwentị ga-enweta Android Oreo, otu afọ agafeela. Ya mere ichere maka ndị ọrụ nwere Moto G4 Plus adịla anya, ọ bụghịkwa na ọ na-atọ ụtọ mgbe niile. Ma, mmalite nke ule ndị a ma ọ dịkarịa ala na-enye ihe mgbaàmà na ọ ga-abata.
Ọ bụ ezie na ọ na-eweta ọtụtụ obi abụọ n'otu oge. N'ihi na Anyị amaghị mgbe ule ndị a ga-amalite, ma ọ bụ ogologo oge ha ga-adịru otu ihe. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma na enweghị nsogbu ọ bụla, ha ga-ewe obere oge na mmelite ahụ nwere ike itinye na ekwentị ozugbo enwere ike.
Ọ bụ ezie na ọ na-eje ozi dị ka a nkwenye ọzọ maka ndị nwe Moto G4 Plus. Motorola na-arụ ọrụ na mmelite ahụ na gam akporo Oreo, ha ahapụbeghị ndị ọrụ na-enweghị ya. Ma ha ga-echere obere oge tupu nata ya.
Anyị ga-ege ntị na ozi ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie n'oge mgbụsị akwụkwọ a, anyị ga-amụtakwu banyere mmalite nke ule ndị a na ikekwe ma ọ bụrụ na e nwere beta ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụghị. Ha nwekwara ike ikwupụta mgbe mmelite nke Moto G4 Plus ga-abata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Motorola ga-anwale Android Oreo na Moto G4 Plus
Ọ erubeghịdị moto g5s ahụ karịa otu afọ mgbe mmalite ya, ugbu a kedụ olileanya maka moto 4